Daawo: Musharax Janagale oo munaasabad heerkeedu sareeyo uga qayb galay Australia – Dawladnimo News
Home » Wararka » Bariga Afrika » Daawo: Musharax Janagale oo munaasabad heerkeedu sareeyo uga qayb galay Australia
Waxaa magaalada Melbourne ee dalka Australia si weyn loogu soo dhaweeyay Musharax Madaxweyne Mudane Dr. C/Risaaq C/laahi Jaamac (Janagale) oo isagu safka hore kaga jira musharaxiinta ugu cad-cad ee u tartamaya doorashada madaxweyne ee Puntland oo lagu wado in ay dhacdo bisha Janaayo 2019.
Xafladan ayaa ahayd middii ugu balaarnayd ee loo qabto musharax u tartamaya xilka doorashada Puntland ee 2019.
Musharax Janagale ayaa ka hadlay arimahan:
Xagga Amniga: waxa uu sheegay inuu sugi doona xuduudaha 5ta gobol iyo degmada Buuhuudle, oo ah sida uu qorayo dastuurka Putland.
Waxbarashada: waxa uu xusay in hadda caruurta Puntland 30% kaliya ay iskool aadaan, taasina ay sabab u tahay tacliinta oo lacag ah. Waxa uu balan qaaday inuu waxbarashada dugsiyada ka dhigi doono lacag la’aan.
La dagaalanka musuq-maasuqa: waxa uu xusay in arimaha Puntland sida weyn u dhaawacay uu yahay musuq-maasuq baahsan, ilaa heer la gaadhay in la gato xildhibaanada.
Dhaqaalaha: waxa uu xusay inuu joojin doono isticmaalka doolarka, kaas oo dhaawacay dhaqaalaha Puntland, waxna lagu kala gadan doono shilin Soomaali.
Siyaasada: waxa uu balan qaaday inuu sanadka koowaad uu hirgelin in dadku codeeyaan, iyadoo laga soo bilaabayo heer deegaanada iyo dowladaha hoose.
Dadweynihii ka soo qeyb galay ayaa si aad ah ugu diirsaday khudbaddii Musharax Janagale oo ahayd mid aad u qiima badan, dadkiina aad u soo jiidatay.
Xafladdan waxaa soo qaban-qaabiyay Jaaliyadda Puntland ee dalkan Australia, waxaana ka soo qeyb-galay qeybaha kala duwan ee Jaaliyadda Puntland. Marti sharaftii madasha lagu casuumay isla markaasna goobta ka hadlay waxaa ka mid ah:
Dr. Maxamed Cabaas oo wasiir ka soo noqday dowladda Puntland ee hadda talada haysa.
Axmed Nuur oo ahaa guddoomiyaha guddiga qaban-qaabada xafladan, isla markaasna horey u soo qabtay xilka Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Maaliyadda waqtigii Kacaanka, muddana ahaa isku xiraha Bangiga Aduunka iyo dowladda Puntland, isla markaasna qaabilsanaa mashaariicda horumarka ee Bangiga Aduunka ka fuliyo Puntland.
Aqoonyahan C/Rashiid A. Axmed, oo ku hadlay magaca dhalinyarada. C/Rashiid waxa uu horay u soo noqday Qunsulka Guud ee Dowladda Federaalka Soomaaliya u fadhiya dalka Zambia, haddana ka tirsan shaqaalaha wasaarada Arimaha Dibada Soomaaliya.
Aqoonyahan Siciid Shiinle oo ka warbixiyay taariikh nololeedka musharax Janagale. Mudane Siciid Shiinle ayaa ka soo shaqeeyay mashruucii fidinta beeraha ee dagaalada sokeeye ka hor, kana mid ahaa aqoonyahanadii ka qalin jabiyay Jaamacaddii umadda.
Ganacsade Cabdi Cilmi (Cabdi Yare)
Aqoonyahan C/Raxmaan Jugaase.
Xaliimo Kaaraan oo ku hadashay magaca gabdhaha.
Sheekh Ciise oo ka mid ah culimada Soomaalida ee Australia.
Cumar Dholawa oo ka warbixiyay marxaladihii ay Puntland soo martay.
Faarax Warsame oo ka socday Jaaliyadda guud ee Soomaalida Australia.
Mudane Maslax Baalle
Waxaa kale oo madasha ka hadlay xubno ka tirsan ganacsatada, haweenka, dhalinyarada, gabdhaha, iyo odayaasha.
Waxaa xafladan si toos ah hawada uga lalinaayay dhammaan warbaahinta kala duwan ee Soomaalida iyo weliba idaacadda SBS ee Australia, qeybteeda Af-Soomaaliga oo uu hagaayay mudane Xasan Jaamac.
Gaba-gabadii xafladda, ayaa waxaa musharaxa buug ku qoran af-Soomaali guddoonsiiyay qoraaga caanka ah ee C/Weli Qambi.